China Welded waya nkịta ụlọ Onye na-emepụta na Supplier |Ọwụwa Anyanwụ Yilong
Mkpuchi ntụ ntụ welded kennel Ọ dị mfe ịgbakọta
Igwe dị n'ime ime ime ime ụlọ mgbatị ahụ dị arọ nke anụ ụlọ anụ ụlọ
Ihe mgbochi Playpen Kennel maka nwamba nkịta
Ihe Mba Nha (Obosara x Elu) Iberibe/Nhazi
YL-PC010 800x800 cm 8
YL-PC014 800x1200cm / 800x700cm 4
ígwè stakes jikọọ panel ike na arịlịka panel ro ala.Ọ dị nnọọ mfe ijikọta panel ọnụ iji gbanwee nha ọnụ.
Ị nwere ike ịgbakọta n'ụdị dị iche iche, dị ka square, hexagon, octagon, wdg.
Enwere ike iji ya ma n'ime ma n'èzí.
Akụrụngwa dị mma:ngere anụ ụlọ bụ nke na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ galavanized ígwè tube na galvanized waya welded panel, elu àgwà ojii ntụ ntụ mkpuchi metal tubes na panel, na YILONG Pet Playpen bụ nke ukwuu nchara na-eguzogide ọgwụ na ihu igwe, Nke a playpen bụ ma inogide na-adịte aka. ;Enwere ike iji ya ma n'ime ma n'èzí, ọ dịkwa mfe mana ọ siri ike zuru oke.
Multifunctional:Site na ogwe 8 ma ọ bụ 4 nke ọ bụla, ị nwere ike ịkpụzi playpen a ka ọ bụrụ akụkụ anọ, square, ma ọ bụ octagon, ọ dị mfe ijikọ otu panel ọnụ ma gbanwee nha nha dị ka ọchịchọ.
Ọnụ ụzọ niile nwere oghere mgbochi, yabụ ọ dị mfe ma dị mfe ime ka ọ bụrụ ọnụ ụzọ ma ọ bụ ọpụpụ ebe ị ka na-egbochi anụ ụlọ gị ịgbanarị.
Nchekwa & Nchekwa:Emebere ihe mgbochi anụ ụlọ a na tube dị larịị na waya igwe iji chebe ụmụaka gị na anụ ụlọ ka ha ghara imerụ onwe ha ahụ na mberede.Arịlịka arịlịka gụnyere na ngwugwu bụ maka gị idozi ngere n'ala ma mee ka ọ ghara ịkụtu ya.Ọ na-anọrị;Ọ dịghị mkpa ichegbu onwe ya maka ya.
Ọ dị mfe ịwụnye:Na ngwa niile achọrọ gụnyere, ọ dị mfe na ngwa ngwa ịtọlite ​​​​na ịwụnye na-enweghị ngwa ọrụ ọzọ achọrọ;Nkpuchi ahụ na-agbanwe ma na-adaba, na-enye ohere maka ngwa ngwa na adaba maka nchekwa.
Na-arụ ọrụ: Zuru okè dị ka ihe eji egwu egwu maka ụmụaka gị ma ọ bụ ogige maka nkịta na nwamba;Kwesịrị ekwesị dị ka ụlọ ọkụkọ, ụlọ ọkụkọ, ma ọ bụ ebe nchekwa maka anụmanụ ndị ọzọ;Mpempe akwụkwọ a ga-arụ ọrụ maka ụmụ nkịta ma ọ bụ obere nkịta ndị na-adịghị awụlikwa elu mana ọ bụchaghị na ọ dabara maka ụdị buru ibu.
3d welded Panel nsu, Austrịa Y Post, Ọnụ ụzọ ámá efere e ji achọ mma, Ihe ndozi Ugboro abụọ Waya Panel Mkpuchi ntụ ntụ, Bracket, Ọnụ ụzọ ámá ọkọlọtọ,